System Optimize Expert Pro v3.3.5.8 Full - Taikkyithar
Home / Window Software / System Optimize Expert Pro v3.3.5.8 Full
System Optimize Expert Pro v3.3.5.8 Full
7:45 AM Harris Nyi
System Optimize Expert ကတော့ကွန်ပြုတာထဲကမလိုအပ်တဲ့
ဖိုင်တို့ကို ရှာဖွေ၊ ရှင်းလင်းပြီး စက်ကိုမြန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်၊
ကိုယ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလုံခြုံအောင်လည်း IE history၊ recent doc history၊ search history တွေကိုအချိန်သတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်၊ ဒီဆော့လ်ဝဲရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အစုံကိုအောက်မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်၊အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
Overall scanning & repairing:
System Optimize Expert's reliable scanning covers your entire system, giving your PC the full-scale protection by repairing all the errors invalid registry entries, system problems and so on.
System improving: Acting as your private doctor, System Optimize Expert is capable of offering professional diagnosis and treatment to ensureastable and smooth system and keep it at peak performance.
Offering the easiest operation: